သတင်း - Acrylic resins များကို ထုတ်လုပ်မှုနည်းလမ်းဖြင့် ခွဲခြားထားသည်။
1. Emulsion ပေါ်လီမာပြုလုပ်ခြင်း- ၎င်းကို မိုနိုမာ၊ အစပြုသူနှင့် ပေါင်းခံရေတို့ကို အတူတကွ တုံ့ပြန်ခြင်းဖြင့် ရရှိသည်။ယေဘူယျအားဖြင့်၊ စေးသည် 50% အစိုင်အခဲ emulsion ဖြစ်ပြီး ရေ 50% ခန့်ပါဝင်သော စေးရည်ဖြစ်သည်။ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ထားသော emulsion များသည် ယေဘုယျအားဖြင့် နို့ဖြူပြာရောင် (Dingdal ဖြစ်စဉ်) ဖြစ်ပြီး ဖန်ခွက်အကူးအပြောင်းအပူချိန်ကို FOX ဖော်မြူလာအရ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ထို့ကြောင့်၊ ဤ emulsion အမျိုးအစားသည် ကြီးမားသော မော်လီကျူးအလေးချိန်ရှိသော်လည်း အစိုင်အခဲပါဝင်မှုသည် ယေဘုယျအားဖြင့် 40% မှ 50% ဖြစ်သည်။ထုတ်လုပ်မှုစက်မှုလုပ်ငန်းသည် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဟဇာတရှိသော emulsion အဖြစ် ရေကိုအသုံးပြုခြင်းကြောင့် တိကျသောထိန်းချုပ်မှုလိုအပ်ပါသည်။
2. Suspension polymerization- ၎င်းသည် အတော်လေးရှုပ်ထွေးသော ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပြီး အစိုင်အခဲအစိုင်အခဲများထုတ်လုပ်ရန်အတွက် အသုံးပြုသည့်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။အစိုင်အခဲ acrylic resin သည် methyl အုပ်စုပါရှိသော acrylate ကိုအသုံးပြု၍ တုံ့ပြန်မှုပိုလီမာပြုလုပ်ခြင်းကိုခံရသည်။မီသိုင်းအုပ်စုပါရှိသော အက်ခရီလိတ်များသည် ယေဘူယျအားဖြင့် အချို့သောလုပ်ငန်းဆောင်တာအုပ်စုတစ်ခုရှိကြပြီး တုံ့ပြန်မှုအိုးအတွင်းရှိ ပေါ်လီမာဓာတ်ပြုမှုတုံ့ပြန်မှုသည် ထိန်းချုပ်ရန်မလွယ်ကူသည့်အပြင် ပေါက်ကွဲအိုးတွင်ကပ်ရန်လွယ်ကူသည်။
3. အစုလိုက်ပိုလီမာပြုလုပ်ခြင်း- ၎င်းသည် အလွန်ထိရောက်သော ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။လုပ်ငန်းစဉ်မှာ ကုန်ကြမ်းများကို အထူးပလပ်စတစ်ဖလင်တစ်ခုထဲသို့ ထည့်ပြီး အစုလိုက်အပြုံလိုက် ဓာတ်ပြုကာ အမှုန်အမွှားများကို ထုတ်ထုတ်ကာ စစ်ထုတ်ရန် ဖြစ်သည်။ဤနည်းလမ်းဖြင့် ထုတ်လုပ်သော အစိုင်အခဲ acrylic resin ၏ သန့်စင်မှုသည် ထုတ်လုပ်မှုနည်းလမ်းအားလုံးတွင် အမြင့်ဆုံးဖြစ်ပြီး ထုတ်ကုန်သည် တည်ငြိမ်သည်။လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ ချို့ယွင်းချက်များမှာလည်း အပြည့်ဖြစ်သည်။